शहीद कृष्ण सेन ‘इच्छुक’ बारे क. घनश्याम ढकालको अनुभूतिमूलक संस्मरण
कृष्ण सेन ‘इच्छुक’ समाजवादी यर्थाथवाद अर्थात् प्रगतिवादी धाराका सशक्त कवि हुन् । साहित्यिक व्यक्तित्वबाहेक उनका सांस्कृतिक, राजनीतिक र पत्रकार व्यक्तित्व पनि छन् । महान् उद्देश्य र आस्थाका लागि एउटा स्रष्टाले कसरी आफूलाई समर्पित र बलिदान गर्न सक्छ भन्ने कुराका उनी राम्रा उदाहरण हुन् । पिता यामबहादुर सेन र माता भीमकुमारी सेनको कोखबाट वि.सं. २०१३ कार्तिक ३ गते भारतको देहरादुनमा सेनको जन्म भएको थियो । जीविकाका लागि यामबहादुर सेन भारतीय सेनामा भर्ती भएका थिए । जागिरकै सिलसिलामा उनले श्रीमती भीमकुमारीलाई पनि देहरादुन लगेका थिए । त्यहीं सेनको जन्म भएको थियो । पुर्ख्यौली घर प्युठानबाट बसाइँ सरेर अर्घाखाँची जिल्लाको जलुके गा.वि.स.को सातमारामा उनको परिवार आएको हो ।
कृष्ण सेन ‘इच्छुक’ साम्यवादी चिन्तनप्रति अटुट आस्था र विश्वास राख्ने व्यक्ति हुन् । राजनीतिक सङ्गठनमार्फत् समाज परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने उनको धारणा थियो । २००६ सालमा स्थापित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सामन्तवाद, साम्राज्यवादविरोधी चेतनाको जगमा नै उनको चिन्तन अडिएको छ । नेपाल तथा विश्वमा अविरल रूपले चल्दै आएको वर्ग सङघर्ष र राजनीतिक आन्दोलनको निरन्तरतासँग भौतिक र भावनात्मक रूपले जोडिएर नै इच्छुकको वैचारिक एवम् साङ्गठनिक क्रियाकलाप अघि बढेको हो ।
मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद र त्यसको नेपाली प्रयोगको वैचारिक संश्लेषण प्रचण्डपथ उनको सैद्धान्तिक एवम् वैचारिक धरातल हो । यसमा उनी सधै प्रतिबद्ध भए । वर्षौवर्षदेखि सामन्ती शोषणको जुवा र वैदेशिक हस्तक्षेपबाट राष्ट्र र जनतालाई मुक्त गराएर समुन्नत, सुन्दर प्रगतिशील समाजको सिर्जना नै उनको तात्कालिक लक्ष्य थियो । शोषणमुक्त वर्गविहीन उदात्त साम्यवादी समाज सेनको दीर्घकालीन सपना थियो । यही चिन्तनबाट उनको सौन्दर्य चेतनाको विकास भएको थियो । चिन्तन एकातिर र कर्म अर्कोतिर गर्ने पाखण्डी प्रवृत्ति उनमा थिएन । उनी शब्दशिल्पी मात्र होइन, कर्म शिल्पी पनि थिए । यी दुवैलाई उनले व्यवहारिक रूपमै जोडे ।
नेकपा (अविभाजित चौथो महाधिवेशन) को भातृ सङ्गठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनबाट सेनले राजनीतिक जीवन सुरु गरेका हुन् । ०३५/३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनमा सहभागी सेनमा पार्टी सदस्यता लिएर सङ्गठनमा क्रियाशील हुन थालेपछि अझै वैचारिक निखार आउन थाल्यो । त्यतिबेला पार्टी भूमिगत हुनाले पार्टीका क्रियाकलापहरू पनि भूमिगत नै हुन्थे । खुला गतिविधि गर्ने माध्यमका रुपमा रहेका जनवर्गीय सङ्गठनहरूले पनि खुला रूपले काम गर्न पाउँदैनथे । ०३६ सालमा जनमत सङग्रहको घोषणापछि राजनीतिक परिवेश अलिकति सहज बनेको थियो । यसकै सापेक्षतामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पनि केही खुकुलो भयो । जनमत सङग्रहमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाले जितेको घोषणा गरियो । ०३८ सालमा चौथौ महाधिवेशनले पञ्चायती आम चुनावलाई बहिष्कार गर्यो । बहिष्कार अभियानमा विद्यार्थी मोर्चाबाट सक्रिय सेन प्रशासनको तारो बनिसकेका थिए । यसै क्रममा उनी ०३९ सालमा क्याम्पसबाटै पक्राउ परेर सुरक्षा कानुनअन्र्तगत ०४४ सालसम्म जेल बसे ।
तत्कालीन अनेरास्ववियु (छैटौं) को संयोजक भएर विद्यार्थी मोर्चा सम्हालेका सेन अखिल नेपाल जनसांस्कृतिक संघको संयोजक र अध्यक्ष भएर सांस्कृतिक मोर्चामा क्रियाशील भए । पार्टी विभाजनको क्रममा उनी नेकपा (मशाल) र एकता केन्द्र हुँदै माओवादीसँग आबद्ध भएका थिए । प्रगतिशील लेखक सङ्घ, नेपालका केन्द्रीय पार्षद सेन आफ्नो रुचिले भन्दा पार्टीको आवश्यकताले पत्रकार भएका हुन् । यसै क्रममा उनी जनादेश (साप्ताहिक) र जनदिशा (दैनिक) का सम्पादक भए । पत्रकारको नाताले उनी नेपाल पत्रकार महासङ्घकोे केन्द्रीय पार्षद र दक्षिण एसियाली पत्रकार सङ्घका सदस्य थिए । समाचारमूलक पत्रिका मात्र होइन, उनले ‘कलम’ साहित्यिक त्रैमासिकको पनि सम्पादन गरे । पार्टीमा उनी नेकपा (माओवादी) का क्षेत्रीय ब्यूरो सदस्य थिए भने ०४८ सालमा संयुक्त जनमोर्चा नेपालका केन्द्रीय सदस्य थिए । एक पटक उनी मानवअधिकारवादी संस्था ‘जनअधिकार सरोकार अभियान’का केन्द्रीय सदस्य समेत भएका थिए ।
नेपालमा ००७ साल, ०१७ साल, ०४६ साल र ०६३ सालमा राजनीतिक परिवर्तनहरू भए । ०६५ सालमा त गणतन्त्र पनि आयो तर यहाँको अर्ध–सामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक सामाजिक तथा आर्थिक संरचनामा कुनै परिवर्तन आएन । यही स्थिर पृष्ठभूमि नै इच्छुकको लेखनको पृष्ठमूमि हो । उनका लेखनका तीन चरण छन् । प्रारम्भदेखि ०४६ सालसम्म उनले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाअन्र्तगत लेखे, ०४६ देखि ०५२ सालसम्मको बहुदलीय व्यवस्थाको पहिलो अवधिमा लेखे भने ०५२ सालमा जनयुद्ध शुरु भएपछि बहुदलीय व्यवस्थाको दोस्रो अवधिमा लेखे । उनका सिर्जना अवधिमा चले/भएका वर्गसङ्घर्ष र राजनीतिक आन्दोलनले सेनको जीवनलाई मात्र होइन, सिर्जनात्मक गतिलाई पनि जर्बजस्त प्रभाव पारेका छन् । पार्टीमा आबद्ध भएदेखि नै उनले लेखकीय प्रतिबद्धताको सवाललाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसात गरे । वर्गीय प्रतिबद्धता, विचारधारात्मक प्रतिबद्धता र साङ्गठनिक प्रतिबद्धताको एकत्व नै लेखकीय प्रतिबद्धता हो । मार्क्सवादी दृष्टिले जीवन र जगतलाई हेर्ने सेनले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयास गरे । असुन्दर जीवनलाई सुन्दरमा बदल्न सकिन्छ तर जीवन वस्तुगत जगतसँग जोडिएको हुनाले वस्तुगत संसारलाई परिवर्तन गरेर मात्र जीवनलाई बदल्न सकिन्छ भन्ने माक्र्सवादी सौन्दर्यशास्त्रको मान्यता हो । त्यसैले प्रगतिवादी साहित्यमा वस्तुगत यथार्थ अभिन्न रूपले जोडिन्छ । इच्छुकले जीवनको कुरूपतालाई कवितामा प्रतिबिम्बन मात्र गरेनन्, त्यसलाई सुन्दरमा परिणत गर्ने व्यवहारमा पनि लगनशील भएर लागिरहे । जीवनको कुरूपता श्रमजीवी जनताको नारकीय जीवनमा मात्र होइन, तिनलाई त्यसरी जीउन बाध्य बनाउने जीवनमा पनि छ । सेनको जीवन सौन्दर्य यही कुरूपताविरुद्ध छ । उनको यो जीवन–सौन्दर्यलाई राष्ट्रको सीमा वा जेलका पर्खालहरूले रोक्न सक्दैनन् । उनले निर्माण गर्न खोजेको राष्ट्रिय मानव मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मानव पनि हो । जीवनबाट कविता पृथक हुन सक्दैन भन्ने कुरामा सेन सचेत थिए । त्यसैले उनका कवितामा सामाजिक मानिसका आँसु, पीडा, प्रेम, घृणा र उल्लासहरू प्रतिबिम्बित भएका छन् । विचार छङ्छङिएर आएको छ तर त्यो नाङ्गो छैन, प्रभावकारी कलाको आवरणमा छ । इच्छुकको सौन्दर्य चेतनालाई राजनीतिक सङ्घर्ष र कठोर जीवन भोगाइले परिमार्जित गर्दै लगेको छ । वर्गसङ्घर्ष, उत्पीडित जनताका दुःख, कष्ट र पीडा, राष्ट्रिय स्वाधीनता, दमन र प्रतिरोध, जनयुद्ध, त्याग, वीरता र उत्सर्ग आदिलाई उनले कविताको अन्तर्वस्तु बनाएका छन् । त्यति मात्र होइन, मधेस, थारु, बँधुवा मजदुर, दलित, महिलाजस्ता उत्पीडित समुदायलाई सेनले कवितामार्फत् वर्गसङ्घर्षको केन्द्रमा ल्याउने प्रयास गरेका छन् । उत्पीडित जातजाति, लिङ्ग, समुदाय वा क्षेत्रलाई वर्ग र राजनीतिक सङ्घर्षबाट कटाएर केन्द्रमा ल्याउने दाबी गर्ने सबाल्टर्नवादीहरूलाई सेनका ‘प्यारो मधेसप्रति’, ‘अस्वीकार’ र ‘आदिवासी दिवस र भिखारीदास सदा’ जस्ता कविताले राम्रो जवाफ दिन्छन् । ‘तिम्रो र हाम्रो संसार’ यस्तो कविता हो जसले वर्गविभाजित समाजको यथार्थ प्रतिबिम्बन गर्दछ ।
सेनको जीवन खुला पुस्तक हो, जसले पनि पढ्न सक्छ । उनले सङ्घर्षशील सार्थक जीवन बाँचे, आस्थामा अटल र अडिग रहे, मृत्युसम्मुख उभिंदा पनि झुकेनन् । प्रहरी हिरासतमै उनको गुपचुप हत्या गरियो । सभ्य संसारमा यो कलङ्कको विषय हो । तर, सेनको सहादतलाई निरपेक्षीकरण गरिनु हुँदैन, जनयुद्धमा मारिएका हजारौं योद्धाहरूकै सापेक्षतामा हेर्नुपर्दछ । कलाकर्म विशिष्ट भए पनि कवि जनताभन्दा ठूलो हुन सक्दैन । सेनजस्तै बेपत्ता बनाएर गुपचुप मारिएका धेरै छन्, तिनको मारिएको भन्ने खवर पनि छैन । अति प्रशंसाले स्रष्टालाई उठाउनुको सट्टा खसाल्छ । त्यसैले सेनलाई क्रान्तिकारी रूपवादको प्रहारबाट जोगाउनुपर्छ । आदर्शवाद र समन्वयवादले सेनको चिन्तनमा बेलावखत टाउको उठाउने गरेका हुन् । यसका साथै उनका रचनामा पाइने कतिपय कमजोरीहरूले सेनको उचाइ घट्दैन । सेनले आफ्नी शिक्षित श्रीमतिलाई आन्दोलनमा पूर्णकालीन बनाएर हिंडाउने प्रयत्न किन गरेनन् होला ? यो पनि एउटा प्रश्नकै रूपमा खडा हुन्छ । उनी गुटगत सङ्कीर्णताबाट माथि उठेका थिए । सांस्कृतिक आन्दोलनमा उनले संयोजनकारी भूमिका खेले । सेनका सपना पूरा भएका छैनन् । एउटा उथलपुथलकारी क्रान्तिले मात्र उनका सपना पूरा हुन सक्छन् ।
पछिल्लाे - कृष्ण सेन ‘इच्छुक’ बहुआयामिक प्रतिभा हुनुहुन्थ्यो – अध्यक्ष प्रचण्ड (भिडियो सहित)
अघिल्लाे - कृष्ण सेन ‘इच्छुक’ र हत्या